UFarewell Le Professionnel: Inkwenkwezi ye-Iconic yaseFrance uJean-Paul Belmondo uyafa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ukonwatyiswa » UFarewell Le Professionnel: Inkwenkwezi ye-Iconic yaseFrance uJean-Paul Belmondo uyafa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zefashoni • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Iifilimu zeBelmondo zazijongwa ngokudibeneyo ngaphezulu kwesigidi se-130 amaxesha kumabala emidlalo.
UJean-Paul Belmondo usweleke eneminyaka engama-88.
Ilivo lomzi mveliso bhanyabhanya waseFrance liyafa.
Umdlali weqonga ebengaphilanga kangangexesha elithile emva kokubethwa sistroke ngo-2001.
Intshatsheli kumdlalo bhanyabhanya waseFrance uJean-Paul Belmondo, owadubula waduma kwilizwe liphela kuJean-Luc Godard oguqulweyo New Wave classic "Ukuphefumla", usweleke eneminyaka engama-88, igqwetha lakhe liqinisekisile.
UJean-Paul Belmondo uyasweleka
Umdlali weqonga ebengaphilanga kangangexesha elithile ebephethwe sistroke ngo-2001.
I-Belmondo-ebizwa ngokuba yi-Bébel ngabaphulaphuli base-France-yaba yenye yeefisi ezinkulu ze-French New Wave iinkwenkwezi kwi-60s kunye ne-70s, ubuso bayo obujongeka njengobungqangi ngokuchasene neempawu zobungangamsha zomlingani wakhe kunye no-Alain Delon.
Uzalelwe ngo-1933 kwihlomela-dolophu yase-Paris lase-Neuilly-sur-Seine, unyana ka-“pied-noir” umkroli uPaul Belmondo, u-Belmondo waya kwizikolo zabucala ezikhethekileyo kodwa wenza kakubi. Ubonakalise umdla kwezemidlalo, kwaye waqalisa umsebenzi omfutshane wamanqindi njengomntu ofikisayo. Emva kokungenwa sisifo sephepha, waba nomdla wokudlala, kwaye wafaka isicelo kwi-Elite National Academy yoBugcisa beDrama, ekugqibeleni wafumana indawo ngo-1952.
Emva kokuthweswa isidanga, uBelmondo waqala ukubamba kwindawo yokubonela, evele kwimidlalo ka-Anouilh, Feydeau noGeorge Bernard Shaw. Ukhusele umtya weendima ezincinci zefilimu.
Ukuqala ngendima yakhe kwiJean-Luc Godard's "Ukuphefumla," waba ngumntu ophambili kwifilimu yaseFrance yeNew Wave. Mhlawumbi waziwa kakhulu ngendima yakhe kwiidrama zolwaphulo-mthetho kunye nezinto ezonwabisayo, naye wadlala kwimilodramas kunye noRomy Schneider noAlain Delon. Wayesaziwa nokuba uzenzela ezakhe iziteki.
Impilo ka-Belmondo yathatha indawo embi kakhulu ngo-2001 xa wayehlaselwa sisifo kwaye wangeniswa esibhedlele eParis, Fransi . Wayekhubazekile ngenxalenye yokufa icala kwaye kwafuneka achithe ixesha lakhe lokufunda nokuthetha.
Uye emva koko wathatha ikhefu ekusebenzeni kodwa wabuyela kwiscreen esikhulu ngo-2009 "Indoda neNja yayo." Kwabonakala ukuba yifilimu yakhe yokugqibela kwaye yamkelwa kakubi ngabagxeki. U-Belmondo kamva waxolisa ngomsebenzi kodwa wathi umncedile woyisa iimpembelelo eziqhubekayo kwi-stroke.
Igqwetha lakhe uMichel Godest uthe umdlali weqonga wasweleka ekhayeni lakhe eParis. “Ebenokudinwa kakhulu ixesha elithile. Wasweleka ethe cwaka. ”
Umnatha we-Whatsapp uthi:
NgoSeptemba 19, 2021 kwi-13: 17
Enkosi ngokwabelana ngoxolo olo lwazi lupheleleyo nceda ugcine.